Yonga Amandla Emsebenzini - Isikhungo se-EcoTechnology
Yonga Amandla EmsebenziniUSteven Hoffman2021-03-04T17:16:47-05:00
Izinhlelo Zokusebenza kahle
Ukuhlolwa Kwezamandla Eziningi Komndeni
ivula efasiteleni elishaUhlelo lweMass Farm Energy
Ukusebenza kahle kwamandla okuthuthukisiwe kuzonciphisa i-carbon footprint yakho ngezinzuzo ezisheshayo zokuncishiswa kwezikweletu zamandla nokusebenza okuthuthukisiwe kwebhizinisi. Isikhungo se-EcoTechnology siyinsiza enkulu yamabhizinisi noma abanikazi bezindlu abafuna ukukhulisa amandla abo, imvamisa ngezindleko eziphansi noma ezingekho nhlobo.
Njengamanje, kunezinto eziningi ezisetshenziswayo ezenza ukonga ugesi kube okungabizi kakhulu kunanini ngaphambili kumabhizinisi. ICentre for EcoTechnology ingakusiza wena nebhizinisi lakho ukuthi nikwazi ukuzulazula, nibeke phambili amathuba futhi nenze izinhlelo zokuvuselelwa kwemishini yesikhathi esizayo. Ngeminye imininingwane nokuthola usizo lobuchwepheshe sicela uxhumane nathi.
Ubuchwepheshe Obonga Amandla
Ukushisa Amanzi Okungenathangi
Izilawuli ze-Boiler Setha kabusha
Imisebenzi Yokonga Amandla
Usizo ekufanelekiseni amaphrojekthi akho ngezikhuthazo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni
Iseluleko sohlelo lwesaphulelo kanye nesikhuthazo
Izindlela ezilula zokonga ngokushesha
Ngubani umhlinzeki wakho wensiza?
413.727.3142 ivula okokudayila kwefoni
Uma uyikhasimende le-Eversource ungafaneleka ngohlelo lwe-Eversource Energy Efficiency.
Ngaphandle kwenkokhiso kuwe, iCentre for EcoTechnology ingasiza ibhizinisi lakho ukuvumelanisa ukuthuthuka kwalo kokusebenzisa amandla nokulondolozwa kwe-Eversource's isaphulelo kanye nezinhlelo zokukhuthaza. Sishayele NAMUHLA!
I-Eversource ibona iqhaza elikhethekile abasebenzi baseCentre for EcoTechnology abanalo ekongweni kwamandla. Isikhungo se-EcoTechnology singahlola ngokushesha ukonga amandla futhi sikhombe ukuthuthuka okufanele izikhuthazi zezezimali ezindlekweni zakho zephrojekthi.
Ifomu Lokuxhumana Lamandla Wokuhlola Amandla
800.944.3212ivula okokudayila kwefoni (Cindezela # 3 ukuthola ezentengiso)
Uma uyikhasimende leBerkshire Gas ungafaneleka ngoHlelo lweGesiNetworks® neBerkshire Gas Energy Efficiency.
IBerkshire Gas ingafaka isandla ku- U-50% ubheke izindleko zokufaka. Lokhu konga amandla okugunyazwe uhlelo kungabonakala ngesikhathi sokuhlolwa. Cela ukuhlolwa NAMUHLA!
IBerkshire Gas inikezela ngezikhuthazo namakhasimende afanelekile ezentengiselwano kanye nezaphulelo zokufakwa kwemishini esebenza kahle kakhulu ngezinhlelo zayo zeGesiNetworks® & Berkshire Gas Energy Efficiency Programme. Ngaphezu kwalokho, iBerkshire Gas inikela ngezinhlelo eziningi ngokubambisana neMassachusetts Board of Building Regulations and Standards (BBRS), iBerkshire Bank, abakhiqizi bemishini nabanye.
413.341.4ivula okokudayila kwefoni207ivula okokudayila kwefoni
Uma uyikhasimende leLiberty Gas ungafaneleka ngezinhlelo zokusebenza kahle kwamandla kagesi weLiberty.
Ngaphandle kwenkokhiso kuwe, iCentre for EcoTechnology ingasiza ibhizinisi lakho ukuvumelanisa ukuthuthuka kwalo kokusebenzisa amandla nokusindisa okuvela kwaLiberty Gas ' isaphulelo kanye nezinhlelo zokukhuthaza. Sishayele NAMUHLA!
ILiberty Gas ibona iqhaza elikhethekile abasebenzi baseCentre for EcoTechnology abanalo ekongweni kwamandla. Isikhungo se-EcoTechnology singahlola ngokushesha ukonga amandla futhi sikhombe ukuthuthuka okufanele izikhuthazi zezezimali ezingafinyelela 100% wezindleko zakho zephrojekthi.
Noma Shayela: 855-472-0318ivula okokudayila kwefoni
Uma ungumnikazi noma opharetha wendawo yokuhlala yemindeni eminingi enamayunithi amahlanu (5) noma ngaphezulu kuleyo ndawo, ukusebenza kahle kwamandla kufanele kube yingxenye ebalulekile yohlelo lwakho lwebhizinisi. Kungakhathalekile iholo lakho, ikhodi yakho yezinga, noma ngabe ngabe isakhiwo sikhona njengamanje noma sihlelelwe ukwakhiwa, ungahle ufanelekele izinhlelo zokunciphisa ukusetshenziswa kwamandla wesikhungo sakho.
Isikhungo se-EcoTechnology sinikela ngeMulti-Family Energy Assessments ezikhungweni ezisentshonalanga yeMassachusetts ukukhomba amathuba wokuthuthukisa amandla angabizi kakhulu.
Ukuthuthuka okulandelayo kungafaneleka kuzikhuthazo ze-Mass Save
Ukuvuselelwa nokulawulwa kokukhanyisa kwamandla
Imishini Yokushisa Amanzi
Izindlela zamanzi ashisayo zasekhaya: izihloko ezineshawa ezigeleza kancane, ama-aerator, nokugoqwa kwamapayipi
Ukuvuselelwa nokulawulwa kwemishini esebenza kahle kakhulu
Amafriji we-ENERGY STAR® afanelekayo nezinye izinto ezifanelekile
Okunye ukuthuthukiswa kwamandla kunqunywa kwisiza esithile
Ezakhiweni ezinamayunithi amane noma ambalwa ngempahla ngayinye, sicela uvakashele eyethu ivula efasiteleni elisha1-4 ukuhlolwa kwamandla omndeni ikhasi.
Sinikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene emphakathini wokulima ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla futhi sikhiqize amandla avuselelekayo agxile ekuletheni amaphrojekthi kusuka kumqondo kuze kube sekuqedeni. Ukuthola imininingwane ebanzi mayelana nezinhlelo ezonga amandla epulazi, vakashela i- ivula efasiteleni elishaUhlelo lweMassachusetts Farm Energy noma usishayele manje ku 413-727-3090ivula okokudayila kwefoni.